Home CLASSIC FOOTBALLER Sheekada Carruurnimada Eric Cantona Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Buuxda ee Legend Kubadda Cagta oo leh naaneyska "Boqorka". Sheekadeena Eric Cantona ee Carruurnimada oo ay weheliso Xaqiiqda Untold Biography Xaqiiqooyinka waxay kuu keenayaan xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Nolosha iyo koritaanka Eric Cantona. Sawirka Sawirka: CNN, Instagram iyo Pinterest.
Falanqayntu waxay ku lug leedahay noloshiisa hore, asalka qoyska, nolosha shakhsiga, xaqiiqada qoyska, qaab nololeedka iyo waxyaabo kale oo yar oo la yaqaan oo ku saabsan isaga.
Haa, qof walbaa wuu ogyahay doorkiisa ku aadan soo nooleynta Manchester United oo ah koox kubad ku cayaareysa 1990s. Si kastaba ha noqotee, qaar yar ayaa tixgeliya Eric Cantona's Biography kaas oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekada Carruurnimada Eric Cantona iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Eric Daniel Pierre Cantona wuxuu ku dhashay maalinta 24th ee May 1966 ee Marseille ee France. Wuxuu ahaa kii labaad ee seddex carruur ah oo ay u dhashay hooyadiis, Éléonore Raurich iyo aabihiis Albert Cantona.
Ilmaha Eric Cantona oo leh hooyadeed motherléonore Raurich. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Dhalashada Faransiiska ee dhalashada cad ee leh dhalashada Talyaani, Faransiiska iyo sidoo kale xididdada Isbaanish-Catalan ayaa lagu soo barbaaray aagga Caillols ee Marseille, halkaas oo uu kula soo barbaaray walaalihiis Jean Marie iyo Joel.
Ku koray dhulkiisii ​​hooyo, qoyska Cantona aad ayuu u liitay. Si kastaba ha noqotee, wuxuu ku helay caruurnimada farxadda leh oo lagu garto kubadda cagta jidadka qulqulaya iyo soo jiidashada quruxda badan ee muuqaalka badda ee ku hareereysan hoygooda.
Sheekada Carruurnimada Eric Cantona iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Waqtigii Cantona uu da 'ahaan jiray 15, wuxuu bilaabay inuu kubada cagta abaabulan ka ciyaaro naadiga maxalliga ah ee Ca Calololais halkaas oo uu ku soo bilaabay goolhaye laakiin ugu dhakhsaha badan wuxuu cadeeyay in cabir kasta oo gooldhalinta laga horjoogsado.
Eric Cantona wuxuu jiray 15 sano jir markii uu bilaabay inuu u ciyaaro Naadiga Deegaanka SO Caillolais. Astaanta Sawirka: Pinterest.
Markaa, hore ayuu u warwareegay, wuu ku raaxeystaa wax kasta oo howsha ah laakiin wuxuu ka gaabiyey inuu himilo mucaaradka ka dhigo xarun dhexe. Ka dib markii uu kasoo muuqday in kabadan 100 ciyaarood oo loo yaqaan 'SO Caillolais', Cantona wuxuu u dhoofay naadiga Auxerre halkaas oo uu rajeynayay inuu ku noqdo xirfadle.
Sheekada Carruurnimada Eric Cantona iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Nolosha Mudnaanta Hore
Cantona wuxuu yimid Auxerre isagoo ah 16-sano jir ah kaasoo umuuqday wax kasta oo aan dambi lahayn. Prodigy kubbadda cagta wuxuu qaatay laba sano isagoo ka shaqeynaya safkiisa ilaa uu ugu dambeyntii sameeyay xirfadiisa ciyaareed intii lagu guda jiray guushii 4-0 ee horyaalka Nancy.
Sawirka Eric Cantona kooxda Auxerre. Astaanta Sawirka: Telefishanka.
Intaa ka dib, shaqadiisa Cantona waxaa la joojiyay sanadka 1984 si loogu suurtogeliyo inuu maro waajibaadka qaran ee qasabka ah ka dib markii lagu amaahiyay Martigues. In kasta oo dhammaantood ay sifiican ugu bilaabeen Cantona markii uu joogay Martigues, "si fiican u dhammee" wuxuu ahaa weed aan weli lagu xarin sannadihii 7 ee mustaqbalkiisa ciyaareed.
Sheekada Carruurnimada Eric Cantona iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Waddada loogu talagalay sheekada
Waxay ahayd markii uu joogay Martigues in Cantona uu ciyaaray kulankiisii ​​ugu horeysay ee xirfadeed ee ciyaarta markii uu wajiga feeraha ku dhuftay saaxiibkiis Bruno Martini. Sannadkii ku xigay (1988) wuxuu ku wada tegey dhammaan kungfu isaga oo ka hortagaya cayaaryahanka Nantes, Michel Der Zakarian.
Ganaaxyo isdaba joog ah iyo ganaaxyo la sheegay in lagu xakameynayay Cantona ee xad-gudubyadiisa ayaa ku guuldareystay inuu soo saaro natiijooyin la jecleysto madaama lagu xukumay kiisas badan oo edbin ah oo ka dhacay Marseille, Bordeaux, Montpellier iyo Nimes halkaasoo uu ku dhawaaqay inuu ka fariistay shaqadiisa ugu horeysay ee kubada cagta 1991.
Eric Cantona waxaa kuxiran kiisaska anshax marinta qeybta ugu fiican shaqadiisa. Astaanta Sawirka: Pinterest.
Sheekada Carruurnimada Eric Cantona iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Sare u qaado sheekada
Ku shaqeynta talada saaxiibkiis dhow iyo taageere weyn - Michel Platini, Cantona wuxuu ku soo laabtay kubada cagta Sheffield Wednesday halkaas oo uu kulahaa waxyar. Intaas ka dib wuxuu dhowr bilood ku qaatay Leeds United wuxuuna ka caawiyay kooxda inay ku guuleysato horyaalnimada Premier League.
Fasaxa weyn ee Cantona ma uusan soo dhicin ka dib 1993 markii uu ka caawiyay Manchester United inay ku guuleysato horyaalkeedii ugu horreeyay sannadihii 26. Iyada oo ay weheliso bandhiggan, Cantona ayaa noqday ciyaartoygii ugu horreeyay ee ku guuleysta horyaalnimada premier League isaga oo kooxo kala duwan ku qaatay xilli ciyaareed isku xiga.
Eric Cantona wuxuu ka caawiyay Manchester United inay ku guuleysato horyaalnimada Premier League 1993. Astaanta Sawirka: Telefishanka.
Si dhakhso leh oo taariikhda loo yaqaan Cantona wuxuu ganacsigiisa ka soo saaraa madadaalo isagoo jilaa ah. Bandhigiisii ​​ugu horreeyay wuxuu yimid kadib xayiraad 1995 ah oo ka timid kubada cagta intii uu ku jiray doorka ciyaartooyda rugby ee filimka majaajillada Faransiiska "Le Bonheur est dans le pré". Wuxuu ku jilay filimo badan tan iyo marki ugu dambeysay 'Ulysses & Mona'. Inta soo hartay, sida ay yiraahdeen, waa taariikh.
Sheekada Carruurnimada Eric Cantona iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Xaqiiqooyinka nolosha qofka
Marka laga soo tago dhibaatooyinka adag ee noloshiisa kubbadda cagta, Cantona wuxuu lahaa guur aan fadeexad lahayn oo uu la galay xaaskiisii ​​ugu horreysay Isabelle oo isaga u dhashay laba carruur ah, Raphael iyo Josephine ka hor inta aysan u marin habab kala duwan 2003.
Dhanka kale, Cantona wuxuu la kulmay aktarada Rachida Brakni halka ay mataleyso filimka 'L'Outremangeur'. Waxay bilaabeen shukaansiga waqti aan dheerayn ka dib waxayna sii wadeen inay guursadaan 2007. Guurkoodu wuxuu ku barakeeyey wiil uu dhalay Amiir.
Eric Cantona iyo xaaskiisa labaad Rachida Brakni. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Sheekada Carruurnimada Eric Cantona iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Xaqiiqooyinka Nolosha Qoyska
Marka loo eego nolosha qoyska ee Cantona, wuxuu ka soo jeedaa qoys hoose oo ka soo jeeda xubnaha 3. Waxaan bixinnaa macluumaad run ah oo kusaabsan xubnaha dhow ee qoyskiisa.
Ku saabsan Eric Cantona aabihiis: Albert waa aabaha Cantona. Wuxuu kasoo shaqeeyey kalkaaliye caafimaad maskaxda inta lagu gudajiray halyeeyga kubada cagta noloshiisa wuxuuna kusii qaatay inuu noqdo sawir qaade hiwaayadeed. Cantona wuxuu ku amaanayaa Albert inuu baray inay marwalba daawan karaan aduunka, u mahadceliyaan quruxdeeda oo ay wax ka bartaan masiibooyinka ku soo dhaca.
Eric Cantona iyo aabihiis Albert. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Ku saabsan Eric Cantona hooyadiis: Léonore Raurich waa hooyada Cantona. Waxay caawisay korinta Cantona iyo walaalihiis waxayna ahayd saameynta ugu wanaagsan ee ugu weyn nolosha Cantona. Waxay siisay kalsoonida uu ugu baahan yahay inuu naftiisa muujiyo kuna dhiirigeliyo inuu noqon karo waxkasta oo qalbigiisa u dejiyey.
Ku saabsan Eric Cantona walaalaha: Cantona wuxuu leeyahay laba walaalo ah oo keliya, walaal weyn o ogu magac daray Jean Marie iyo sidoo kale walaal ka yar oo lagu magacaabo Joel. Jean wuxuu ka shaqeyn jiray sidii wakiilka isboorti ka hor intuusan ku lug laheyn mashruucyada filimada halka Joel uu ku yaraa xirfadiisa kubada cagta ka hor intuuna sidoo kale xiiseyneynin inuu matalo.
Eric Cantona walaalihiis Jean (bidix) iyo Joel (midig). Sawirka Sawirka: Twitter.
Waxyaabaha ku saabsan qaraabada Eric Cantona: Ayeeyooyinka Cantona ayeeyadood waxay ahaayeen Pedro Raurich iyo Francesca Farnos halka awoowe iyo ayeeyadiis ay ahaayeen Joseph Cantona iyo Lucienne Thérèse Faglia siday u kala horreeyaan. Cantona wuxuu leeyahay adeero iyo abtiyaal aan wali la aqoonsan, sidoo kale abtiyaashiisa, adeeradooda iyo adeeradooda lama yaqaanin waqtiga qoraalka.
Sheekada Carruurnimada Eric Cantona iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Xaqiiqooyinka Nolosha Nolosha
Ka soo horjeedda mala-awaalka ballaaran, Cantona ma lahan dhibaato dabeecad laakiin shaqsiyad aan dad badani xamili karin. Shaqsigiisa ayaa muujinaya astaamaha astaamaha zemac-ga sida dhaqso-u-sixirka iyo xasaasiga.
Intaas waxaa sii dheer isagu waa mid shucuur ku dheehantahay, mala-awaal ah isla markaana u furan inuu muujiyo faahfaahinta ku saabsan noloshiisa shaqsiyadeed iyo tan gaarka ah. Waxyaabaha uu jecel yahay iyo waxyaabaha uu hiwaayadda u leeyahay waxaa ka mid ah ciyaarista kubbadda xeebta, ku-simaha, qorista iyo waqti la qaadashada qoyska iyo saaxiibbada.
Eric Cantona wuxuu jecel yahay kubbadda cagta xeebta. Astaanta Sawirka: Pinterest.
Sheekada Carruurnimada Eric Cantona iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Xaqiiqooyinka hab nololeedka
Ma ogtahay in Catona ay haysato qiyaasta saamixiisa ka badan $ 25 million waqtiga qoritaanka? Jilaaga Kubadda Cagta wuxuu aasaasay aasaaska maalkiisa isagoo ciyaartoy ah ka hor inta uusan si buuxda ugu dhex jirin madadaalo.
Eric Cantona waa mid kamid ah halyeeyooyinka kubada cagta kuwaa oo wanaajiyay ka dib markii uu fariistay. Astaanta Sawirka: Fikraddaada.
Hantida marqaatiga u ah hantida weyn ee hal abuurka leh isla markaana siineysa midabbo qaabkeeda qarash garaynta waxaa ka mid ah dhismihiisa £ 2m ee ku yaal degmada Fontenay-sous-Bois ee ku taal Paris. In kasta oo aan wax badan laga ogayn ururinta gawaarida Cantona, hadana waxaa la rumeysan yahay inuu leeyahay qalin qori ah oo loogu talagalay dadka caanka ah ee gudbiya dareenkiisa qaab-dhismeedka.
Sheekada Carruurnimada Eric Cantona iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Waad ku mahadsan tahay akhriska ilaa marxaladan. Halkan, waxaan ku siinaynaa xaqiiqooyin aan aad loo aqoon oo aadan weligaa aqoonin Eric Cantona.
Diinta: Cantona wali si cad uma shaacin inuu xiriirkiisa diimeed la leeyahay. Midkoodna looma yaqaan inuu yahay diin laawe. Si kastaba ha noqotee, isagu waa diin xagga tayada kale ee wanaagsan sida hal abuurka, u doodista iyo dib u soo celinta.
Sigaar cabidda iyo cabbitaanka: Waxaa la siiyaa sigaar cabid gudaha iyo banaanka ah iyo sidoo kale inuu si mas'uul ah u cabo. Daraasado dhow oo laga sameeyay qaabkiisa sigaar cabista ayaa muujinaya inuu ku dhegan yahay sigaarka tubaakada sida looga soo horjeedo xashiishadda iyo waxyaabaha kale ee la nuugo.
Eric Cantona ayaa sigaar cabaya oo cabbaya si mas'uuliyadi ku jirto. Sawirka Sawirka: Spool iyo Pinterest.
Tattoos: Halyeeygu wuxuu iska leeyahay dalagii hore ee ciyaartoydii kubbadda cagta ee aan lahayn tattoos waqtiga qoraalka. Midkoodna umaba muuqato inay u qalmayaan inuu helo farshaxanimada jirka maadaama uu soo dhaafay raysal wasaare.
Micnaha Magaca: Ma ogtahay in magaca Eric macnihiisu yahay “Mid” ama “Ruler” halka “Cantona” uu yahay magac asal ahaan Faransiis ah oo macnaheedu yahay "Thanks". Intaa waxaa sii dheer, waxaa loogu naaneeso "King" waayihiisa kubadeed ee England.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay aqrintayada sheeko caruurkeena Eric Cantona oo ay kujirto Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Francesco Totti Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Rio Ferdinand Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weyn
Michael Owen Sheeko caruureed sheeko xambaarsan Xogta Warka Xogta
Ricardo Kaka Hooyo sheeko sheeko xambaarsan faahfaahinta sawirada
Andrea Pirlo Storyhood Plus Xogta Warka Xogta Leh
Diego Maradona Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Adriano Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha